सेक्सी नायिका सुष्मासँग रात विताउन एक लाखको अफर ! • Janaboli
सेक्सी नायिका सुष्मासँग रात विताउन एक लाखको अफर !
नेपाली समाज यौनका सम्बन्धमा कुण्ठित छ। कतिपय मनोविश्लेषक भन्छन्, ‘नेपालीहरू बाहिरी दुनियाँसँग यौनका विषयमा छिःछिः र दुर-दुर गर्छन्, भित्र भने यौनबाहेक केही सोच्दैनन्।’ यो कुरा नायिका सुष्मा कार्कीलाई पनि लाग्न थालेको छ। केही समययता नेपाली चलचित्रकी हट नायिकाको सूचीमा दरिएकी सुष्माका जति पनि समाचार बने, संयोगवश ती सबै यौनकै वरिपरि थिए। उनी पनि के कम, आफ्ना शुभचिन्तकहरू जे चाहन्छन् उनी त्यो पूरा गर्न पछि पर्दिनन्। मेरो एउटा साथी छ र केही म्युजिक भिडियोबाट रजतपटमा देखिएकी हट सुष्माले अश्विनी कोइरालासँग बाहिरी दुनियाँका विषयमा त बोलिन् नै, आफ्ना केही आन्तरिक रहस्य पनि खोलिदिइन्।
किन यति सार्‍हो खुलेको ?
बाहिर जति सार्‍हो हल्ला छ, त्यति सार्‍हो चाहिँ होइनन्। यस्ता हल्ला कहिले पत्रकारहरूले चलाइदिन्छन्, कहिले म आफैं चलाउँछु।
पत्रिकालाई केही न केही त मसला चाहियो, पत्रकारले ‘लहै सुष्मा, तिम्रा बारेमा म यस्तो लेख्दैछु’ भन्नुहुन्छ। मेरो नाइँ भन्ने बानी छैन। त्यसैले छापिन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्ना बारेमा पत्रिकामा नयाँ कुरा आओस् भनेरै आफैं गसिपका विषय दिन्छु।
त्यस्तो सोच राख्ने दर्शकहरूको संख्या कति पाउनुभयो ?
प्रत्येक महिना दुई-चार जना। कसैले फोनमा कसैले भेटमा र कसैले बाहिरफेर यस्ता कुरा गर्छन्। त्यसैले पनि मैले आफ्नो पुरानो मोबाइल नम्बर परिवर्तन गरें। पहिले म सबैको कलाकार हुँ, किन प्रशंसकहरूलाई अबोइड गरौं भन्ने लाग्थ्यो। अहिले आफ्नो घेरा सीमित बनाएकी छु।
त्यस्तो कुनै फ्यान, जसले सबैभन्दा पीडादायी कुरा गर्‍यो ?
एकपटक मध्यरातमा फोन आयो। म मस्त निद्रामा थिएँ। पहिलो पटक सायद उठाउन सकिन। फोन उठाएपछि उसले राम्रो कुरा गर्‍यो। कुरा गर्दै जाँदा ‘म तिमीलाई एक रातको १ लाख रुपैयाँ दिन्छु, प्लिज’ भन्न थाल्यो। अनि त मेरो होस हवास उड्यो। त्यसअघि फेसबुकमा दुई लाखको अफर आएको थियो।
sushma karki tattoo www.janaboli.com
त्यो टाटुमा गुलाफको फूल पनि छ। त्यो पनि त हेर्नुपर्‍यो नि।
अँ फरक पर्दो रहेछ। अरूलाई टाइम दिनु नपर्ने, अरूको हस्तक्षेप सहनु नपर्ने जस्तो लाग्यो। मानिस जुन लाइफ बाँच्छ त्यसैमा रमाउनु पर्‍यो नि, होइन ?
जति सुकै खुला हुन खोजे पनि म बस्ने यहि नेपाली समाज हो। समाजले के भन्छ भन्दा पनि घर परिवारले के भन्छन् भन्ने कुरा मलाई महत्वपूर्ण लाग्छ। साप्ताहिक यति लोकपि्रय छ कि मेरो फ्यानहरूको हातमा मात्र पुग्दैन, मेरो घरभित्र पनि पुग्छ। साथीभाइसँग गर्ने कुरा र सार्वजनिक गर्ने कुरा फरक पार्नै पर्‍यो नि।
गर्छु नि। मलाई पनि एउटा हेन्डसम केटा होस्, जसले अब धेरै काम गर्‍यौं, विवाह गरेर बसौं भनोस् भन्ने लाग्छ। आखिर एक दिन त मैले चलचित्र छाड्नैपर्छ। अँ राम्रो कलाकार बन्ने सपना पूरा नभै चाहिँ विवाह गर्दिनँ।